Inona no atao hoe SMS? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny S	» SMS
SMS no fanafohezana ny hoe Serivisy hafatra fohy.
Ny fenitra tany am-boalohany amin'ny fandefasana hafatra mifototra amin'ny lahatsoratra amin'ny alàlan'ny fitaovana finday. Ny hafatra an-tsoratra tokana dia noferana ho tarehintsoratra 160 ary misy habaka. Ny SMS dia natao hifanaraka amin'ny protocole famantarana hafa, ka izany no mahatonga ny halavan'ny hafatra SMS voafetra ho 160 7-bit characters, izany hoe 1120 bits, na 140 bytes. Raha misy mpampiasa mandefa tarehintsoratra mihoatra ny 160 dia azo alefa amin'ny ampahany 6 amin'ny fitambaran'ny tarehintsoratra 918 ao amin'ny hafatra mifandray.